Indlu elunxwemeni lolwandle! - Iinyawo phezu kwesanti - I-Airbnb
Indlu elunxwemeni lolwandle! - Iinyawo phezu kwesanti
Praia de, Paraíba, Brazil
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguSusane
USusane ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Jonga ikhalenda ukuze ubone i-$. Iyahluka ngokwenani leendwendwe.
Ujongene nolwandle, amagumbi okulala ama-3: amagumbi amabini aphindwe kabini kwi-suite, iibhedi zeKumkani kunye neKumkanikazi yobukhulu kunye noqhekeko, i-1 eyodwa enefeni. Umgangatho weTerrace2ndo. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Igumbi lokutyela, igumbi lokuhlala elikhulu, i-sofa yesikhumba ekhululekile. Idekhi emi phezu kwesanti. Kuphela i-1.5 km ukusuka kwisikwere esiphakathi, indlu ifakwe kwi-Pousada Na Beira do Mar (9.2 kwi-Booking), apho unokuthembela kwisidlo sakusasa. Yonwabela iintsuku ezimangalisayo!
Indlu yenzelwe ukusetyenziswa komntu ngabanini be-Inn, inokufikelela ngokuzimeleyo ngokupheleleyo, ibekwe elunxwemeni, kwindawo ezolileyo enomoya omncinci. Inkulu kwaye iphangalele, inamagumbi okulala ajonge ukuphuma kwelanga phezu koLwandle lwaseBay. Indlu yabahambi incinci, iqhutywa lusapho, kwaye ungathembela kwisikhokelo esivela kwiqela lethu, kunye nokubekw' esweni ebusuku kunye negaraji evaliweyo yemoto yakho. Jonga iPousada yethu ekuBhukeni ukujonga uphononongo lweendwendwe zethu: Pousada Na Beira do Mar Baía da Traição.
I-Baía da Traição ngumasipala omncinci, obekwe ecaleni kowona vimba mkhulu wemveli wepotiguaras eBrazil. Ngenxa yesi sizathu, indalo ihlala igcinwe kakuhle. Uluntu lwenziwa ngabantu abalula nabanobubele. Ukutya kommandla, imveli, kunye neentlanzi kunye neekreyifishi.
Umbuki zindwendwe ngu- Susane
Asihlali kwisiza, kodwa abasebenzi behostele yethu baya kufumaneka naziphi na iingcebiso okanye iimeko.